Filankevitry ny minisitra: mitohy mandritra ny 15 andro fahamehana ara-pahasalamana | NewsMada
Filankevitry ny minisitra: mitohy mandritra ny 15 andro fahamehana ara-pahasalamana
Mitohy mandritra ny 15 andro manerana an’i Madagasikara ny “Fahamehana ara-pahasalamana”, araka ny andininy voalohany amin’ny didim-panjakana lah. faha 2020-370, ny 4 avrily 2020, tamin’ny filankevitry ny minisitra teny Ambohitsorohitra, afakomaly. Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny filohan’ny Repoblika ny filohan’ny Antenimierampirenena sy ny filohan’ny Anteni-meran­­doholona ary ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm- panorenana izany. Antony ny lafiny fahasalamana sy ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka.
Mitarika ny fampiharana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dalàna momba ny vanim-potoana manokana mametra ny atao hoe fahamehana io didim-panjakana io, araka ny And. 2.
Natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana ny fampiharana ny And. 18 ao amin’ny lalàna lah. 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 momba ny vanim-potoana manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny filohan’ny Repoblika amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny And. 3 amin’io didim-panjakana io. Eo koa ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana.
Miantoka ny fahantanterahana azy ireo minisitra ny voakasika, araka ny And. 5, ary manankery avy hatrany io didim-panjakana io raha vao navoaka tamin’ny radio sy televiziona, araka ny And. 6.
Tsara ho fantatra, araka ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ny governemanta, omaly: tsy mitovy amin’ny fepetra amin’ny hoe fihibohana ny fahamehana ara-pahasalamana. Izay no nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fanavazana ho an’ny vahoaka malagasy, omaly alina.